pre-conception counselling – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမြိုးသမီးတဈယောကျ အိမျထောငျပွုပွီးနောကျပိုငျးမှာ အိမျမှုကိစ်စ၊စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးတှအေပွငျ မြိုးဆကျခနျြထားဖို့ရာ ကိုယျဝနျဆောငျမယျ..မှေးဖှားဖို့ ပွငျဆငျမယျ..မှေးဖှားပွီးနောကျပိုငျး ကလေးကို ထိနျးကြောငျးဖို့ရာ တာဝနျပိုမြားလာမယျ..ဒီလို မှေးဖှားပွီးနောကျပိုငျးကိုသာ ပိုတှေးကွညျ့တတျကွပါတယျ.. သို့သျော ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားသငျ့တဲ့ အခကျြကလေးတှကေိုတော့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ…ဒါကွောငျ့ သတိပွုစရာ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ ပွငျဆငျစရာမြားကို ပွောပွခငျြပါတယျ…
– ဆရာဝနျနှငျ့ပွသပါ .. medical check up လုပျပါ
ကိုယျဝနျမဆောငျခငျမှာ မိမိပွနကြေ ဆရာဝနျ(သို့) သားဖှားမီးယပျအထူးကုဆရာဝနျဆီ အရငျ သှားပွပါ.. လိုအပျသော ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှု ခံယူပါ… ဒါမှသာ ကိုယျဝနျရဖို့ရနျ လှယျကူသော နညျးလမျးမြားနှငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျနရေငျး ကွုံတှနေို့ငျသော ကနျြးမာရေးမြားအခွအေနမြေား၊ မိမိမှာ ကလေးကို ကူးစကျနိုငျသော ရောဂါမြား ရှိပါက မကူးစကျအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျဆှေးနှေးထားနိုငျပါတယျ…
– ကိုယျဝနျတားဆေး (သို့) ပစ်စညျးမြား ကို ရပျတနျ့ပါ
အိမျထောငျပွုပွီးကာစ သားသမီးမလိုခငျြသေး၍ ဆေး(သို့) ပစ်စညျးမြား အသုံးပွုခဲ့ပါက ယခုအခြိနျမှာ အကုနျ ရပျပဈရပါမယျ..
– မိမိရဲ့ ရာသီသှေးဆငျးခြိနျကို မှတျသားထားပါ
အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ မြိုးဥဟာ တဈရကျနီးပါးပဲ ရှငျသနျနိုငျပွီး အမြိုးသားတဈယောကျရဲ့ သုတျပိုးဟာ တဈပတျနီးပါး အသကျရှငျနိုငျပါတယျ.. ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးအခြိနျကတော့ မြိုးဥကွှပွေီး တဈရကျ နှဈရကျ အတှငျး(ရာသီသှေးမဆငျးခငျ နှဈပတျ) ဖွဈပါတယျ..
– မိမိမှာ ရှိသငျ့သော ကိုယျအလေးခြိနျ(body mass index) ကို ထိနျးပါ
ဝလှနျးသော အမြိုးသမီးမြားဟာ ပုံမှနျအမြိုးသမီးထကျ ကိုယျဝနျရဖို့ရနျ ခကျခဲသလို ပိနျလှနျးသူမြားဟာလဲ ပိုလို့ ခကျခဲပါတယျ.. ဒါကွောငျ့ ပိနျလှနျးဝလှနျးနပေါက ပုံမှနျအလေးခြိနျရောကျနိုငျသော လကေ့ငျြ့ခနျးမြား လုပျပါ ၊အစားအသောကျမြား စားသငျ့ပါတယျ…
– ဗီတာမငျ၊ folic acid သောကျသုံးပါ
ကိုယျဝနျဆောငျရနျကွိုးစားနခြေိနျ၊ ကိုယျဝနျမရခငျ တဈလလောကျမှ လိုအပျသော ဗီတာမငျ၊ ဖောလဈအကျဆဈ တို့ကို သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ ကလေးမှေးဖှားလာခြိနျ ပုံမမှနျဖွဈတတျတာတှကေို လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ.. ဦးဏှောကျနဲ့ အာရုံကွောထိခိုကျမှုကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ.. ဗီတာမငျခြို့တဲ့မှုကွောငျ့ ဖွဈပှားနိုငျသော ရောဂါမြားကိုလဲ လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ…
– ကနျြးမာစသေော၊သငျ့တငျ့မြှတသော အစားအသောကျမြားကို စားသုံးပါ
အစားအစာမြားကို မြှတစှာ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ လိုအပျသော အသားဓာတျ ၊သံဓာတျ အစရှိတာတှေ ရရှိနိုငျပါတယျ… နှောငျးပိုငျးမိခငျကနျြးမာနမှေသာ သန်ဓသေားကို ထိခိုကျမှုနှုနျးလြော့ခနြိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ..အဆိပျအတောကျဖွဈစသေော အစားအစာမြားကို ရှောငျကွဉျပါ… ကဖငျးဓာတျမြားသော ကျောဖီမြားကို မသောကျသငျ့ပါ
– ဆေးလိပျ၊ အရကျ၊ တခွားသော မှုးယဈစသေညျ့ ဆေးမြားကို ရပျပါ
ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာ မြိုးပှားနှုနျးကို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ.. မိမိမသောကျသျောလညျး အမြိုးသားသောကျနပေါကလညျး အမြိုးသားမှာ မြိုးပှားနှုနျးကဆြငျးနိုငျသလို မိမိနားမှာ သောကျတတျပါက second smoker ချေါ ဆေးလိပျငှကေို့ တဆငျ့ရှုသှငျးသူ ဖွဈနတောမို့.. အိမျထောငျဖကျနှဈယောကျလုံးမသောကျလြှငျ အကောငျးဆုံးပါ
ထိုအတူ တခွားသော အရကျမြား၊မှုးယဈဆေးမြားဟာလညျး ကိုယျဝနျရနိုငျဖို့အတှကျ အဟနျ့အတားမြား ဖွဈတာမို့ ကိုယျဝနျဆောငျနခြေိနျမှာ ရပျတနျ့သငျ့ပါတယျ … ကိုယျဝနျဆောငျနခြေိနျအတှငျး သုံးစှဲလြှငျတော့ မိခငျရော သန်ဓသေားပါ ပိုလို့ ထိခိုကျနိုငျပါတယျ..
– မြိုးပှားနှုနျးကဆြငျးစနေိုငျတဲ့ ပိုးသတျဆေး၊ပေါငျးသကျဆေးမြားကို ရှောငျကွဉျပါ
မိမိဟာ ပိုးသတျဆေးပေါငျးသတျဆေးမြားနဲ့ ထိတှနေ့ရေသူဖွဈပါက.. လကျအိတျ၊ မကျြနှာဖုံးအစရှိတာတှေ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ.
– လုံလောကျသော အနားယူမှု ရှိပါ
အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျရဖို့ ကွိုးစားနပေါက မိမိစိတျကို ထိခိုကျစနေိုငျသော၊ စိတျဖိဆီးမှုမြားစသေော ကိစ်စမြားကို အတတျနိုငျဆုံးရှောငျပါ၊ စိတျသကျသာစသေော ယောဂကငျြ့စဉျမြား၊ ကနျြးမာရေးလကေ့ငျြ့ခနျးမြား လုပျပါ
ဒီလိုနညျးလမျးမြားဖွငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားနိုငျသလို ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ၊ မီးဖှားပွီး အခြိနျတှမှောလဲ မိခငျရော ကလေးပါ ကနျြးမာရေး ပိုမိုကောငျးမှနျနိုငျတာမို့ လိုကျနာကငျြ့သုံးသငျ့ပါတယျလို့ အကွုံပွုလိုကျရပါတယျ…
ကနျြးမာသော ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြား ဖွဈနိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုပွုလကျြ
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ အိမ်​​ထောင်​ပြုပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ အိမ်​​မှုကိစ္စ၊စီးပွား​ရေး၊ လူမှု​ရေး​တွေအပြင်​ မျိုးဆက်​ချန်​ထားဖို့ရာ ကိ်ုယ်​ဝန်​​​ဆောင်​မယ်​..​မွေးဖွားဖို့ ပြင်​ဆင်​မယ်​..​မွေးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်း က​လေး​ကို ထိန်း​ကျောင်းဖို့ရာ တာဝန်​ပိုများလာမယ်..ဒီလို မွေးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်းကိုသာ ပိုတွေးကြည့်​တတ်​ကြပါတယ်​.. သို့​သော်​ ကိ်ုယ်​ဝန်​​မ​ဆောင်​ခင်​ ကြိုတင်​ပြင်​ဆင်​ထားသင့်​တဲ့ အချက်​က​လေး​တွေကို​တော့ ​မေ့​လျော့​​နေတတ်​ကြပါတယ်​...ဒါ​ကြောင့်​ သတိပြုစရာ ကိုယ်ဝန်​မ​ဆောင်​ခင်​ ပြင်​ဆင်​စရာများကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​...
- ဆရာဝန်​နှင့်​ပြသပါ .. medical check up လုပ်​ပါ
ကိုိုယ်​ဝန်​မ​ဆောင်​ခင်​မှာ မိမိပြ​နေကျ ဆရာဝန်​(သို့) သားဖွားမီးယပ်​အထူးကုဆရာဝန်​ဆီ အရင်​ သွားပြပါ.. လိုအပ်​​သော ကျန်းမာ​ရေး စစ်​​ဆေးမှု ခံယူပါ... ဒါမှသာ ကိုယ်​ဝန်​ရဖို့ရန်​ လွယ်​ကူ​သော နည်းလမ်းများနှင့်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေရင်း ကြုံ​တွေ့နိုင်​​သော ကျန်းမာ​ရေးများအ​ခြေအ​နေများ၊ မိမိမှာ က​လေးကို ကူးစက်​နိုင်​​သော ​ရောဂါများ ရှိပါက မကူးစက်​​အောင်​ ကြိုတင်​​ပြင်​​ဆင်​​ဆွေး​နွေးထားနိုင်​ပါတယ်​...
- ကိုယ်​ဝန်​တား​ဆေး (သို့) ပစ္စည်းများ ကို ရပ်​တန့်​ပါ
အိမ်​​ထောင်​ပြုပြီးကာစ သားသမီးမလိုချင်​​သေး၍ ​ဆေး(သို့) ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခဲ့ပါက ယခုအချိန်​မှာ အကုန်​ ရပ်​ပစ်​ရပါမယ်​..
- မိမိရဲ့ ရာသီ​သွေးဆင်းချိန်​ကို မှတ်​သားထားပါ
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ မျိုးဥဟာ တစ်​ရက်​နီးပါးပဲ ရှင်​သန်​နိုင်​ပြီး အမျိုးသားတစ်​​ယောက်​ရဲ့ သုတ်​ပိုးဟာ တစ်​ပတ်​နီးပါး အသက်​ရှင်​နိုင်​ပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ဖို့အတွက်​ အ​ကောင်းဆုံးအချိန်​က​တော့ မျိုးဥ​ကြွေပြီး တစ်​ရက်​ နှစ်​ရက်​ အတွင်း(ရာသီ​သွေးမဆင်းခင်​ နှစ်​ပတ်​) ဖြစ်​ပါတယ်​..
- မိမိမှာ ရှိသင့်​​သော ကိုယ်​အ​လေးချိန်​(body mass index) ကို ထိန်းပါ
ဝလွန်း​သော အမျိုးသမီးများဟာ ပုံမှန်​အမျိုးသမီးထက်​ ကိုယ်​ဝန်​ရဖို့ရန်​ ခက်​ခဲသလို ပိန်​လွန်းသူများဟာလဲ ပိုလို့ ခက်​ခဲပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​ ပိန်​လွန်းဝလွန်း​နေပါက ပုံမှန်​အ​လေးချိန်​​​ရောက်​နိုင်​​သော ​လေ့ကျင့်​ခန်းများ လုပ်​ပါ ၊အစားအ​သောက်​များ စားသင့်​ပါတယ်​...
- ဗီတာမင်​၊ folic acid ​သောက်​သုံးပါ
ကိုယ်​ဝန်​​​ဆောင်​ရန်​ကြိုးစား​နေချိန်​၊ ကိုယ်​ဝန်​မရခင်​ တစ်​​လ​လောက်​မှ လိုအပ်​​သော ဗီတာမင်​၊ ​ဖောလစ်​အက်​ဆစ်​ တို့ကို ​သောက်​သုံးခြင်းဖြင့်​ က​လေး​မွေးဖွားလာချိန်​ ပုံမမှန်​ဖြစ်​တတ်​တာ​တွေကို ​လျော့ချပေးနိုင်​ပါတယ်​.. ဦး​ဏှောက်​နဲ့ အာရုံ​ကြောထိခိုက်​မှုကို ကာကွယ်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​.. ဗီိတာမင်​ချို့တဲ့မှု​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပွားနိုင်​​သော ​ရောဂါများကိုလဲ ​လျော့ချ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​...
- ကျန်းမာ​​​စေ​သော၊သင့်​တင့်​မျှတ​သော အစားအ​သောက်​များကို စားသုံးပါ
အစားအစာများကို ​မျှတစွာ စားသုံးခြင်းဖြင့်​ လိုအပ်​​သော အသားဓာတ်​ ၊သံဓာတ်​ အစရှိတာ​တွေ ရရှိနိုင်​ပါတယ်​... ​နှောင်းပိုင်းမိခင်​ကျန်းမာ​နေမှသာ သ​န္ဓေသားကို ထိခိုက်​မှုနှုန်း​လျော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​..အဆိပ်​အ​တောက်ဖြစ်​​စေ​သော အစားအစာများကို ​ရှောင်​ကြဉ်​ပါ... ​ကဖင်းဓာတ်​များသော ​ကော်​ဖီများကို ​​မ​သောက်​သင့်​ပါ
- ​ဆေးလိပ်​၊ အရက်​၊ တခြား​သော မှုးယစ်​​စေသည့်​ ​ဆေးများကို ရပ်​ပါ
​ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်းဟာ မျိုးပွားနှုန်းကို ​လျော့ကျ​စေနိုင်​ပါတယ်​.. မိမိမေ​သာက်​​သော်​လည်း အမျိုးသား​သောက်​​နေပါကလည်း အမျိုးသားမှာ မျိုးပွားနှုန်းကျဆင်းနိုင်​သလို မိမိနားမှာ ​သောက်​တတ်​ပါက second smoker ​ခေါ် ​ဆေးလိပ်​​ငွေ့ကို တဆင့်​ရှုသွင်းသူ ဖြစ်​​နေတာမို့.. အိမ်​​ထောင်​ဖက်​နှစ်​​ယောက်​လုံးမ​သောက်​လျှင်​ အ​ကောင်းဆုံးပါ
ထိုအတူ တခြား​သော အရက်​များ၊မှုးယစ်​​ဆေးများဟာလည်း ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ဖို့အတွက်​ အဟန့်​အတားများ ဖြစ်​တာမို့ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေချိန်​မှာ ရပ်​တန့်​သင့်​ပါတယ်​ ... ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေချိန်​အတွင်း သုံးစွဲလျှင်​​တော့ မိခင်​​ရော သ​န္ဓေသားပါ ပိုလို့ ထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​..
- မျိုးပွားနှုန်းကျဆင်း​စေနိုင်​တဲ့ ပိုးသတ်​​ဆေး၊​ပေါင်းသက်​​ဆေးများကို ​ရှောင်​ကြဉ်​ပါ
မိမိဟာ ပိုးသတ်​​ဆေး​ပေါင်းသတ်​​ဆေးများနဲ့ ထိ​တွေ့​နေရသူဖြစ်​ပါက.. လက်​အိတ်​၊ မျက်​နှာဖုံးအစရှိတာ​တွေ အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်​.
- လုံ​လောက်​​သော အနားယူမှု ရှိပါ
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​ရဖို့ ကြိုးစား​နေပါက မိမိစိတ်​ကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​​သော၊ စိတ်​ဖိဆီးမှုများ​စေ​သော ကိစ္စများကို အတတ်​နိုင်​ဆုံး​ရှောင်​ပါ၊ စိတ်​သက်​သာ​စေ​သော ​ယောဂကျင့်​စဉ်​များ၊ ကျန်းမာ​ရေး​လေ့ကျင့်​ခန်းများ လုပ်​ပါ
ဒီလိုနည်းလမ်းများဖြင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ဖို့ အခွင့်​အလမ်းများနိုင်​သလို ​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​၊ မီးဖွားပြီး အချိန်​​တွေမှာလဲ မိခင်​​ရော က​လေးပါ ကျန်းမာ​ရေး ပိုမို​ကောင်းမွန်​နိုင်​တာမို့ လိုက်​နာကျင့်​သုံးသင့်​ပါတယ်​လို့ အကြုံပြုလိုက်​ရပါတယ်​...
ကျန်းမာ​သော ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုးသမီးများ ဖြစ်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆုပြုလျက်